Amerika Avaratra · Desambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Avaratra · Desambra, 2011
Tantara mikasika ny Amerika Avaratra tamin'ny Desambra, 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Desambra 2011
Etazonia 08 Desambra 2011
Niteraka fanehoan-kevitra feno fanalàna azy teo amin'ny tontolon'ny aterineto miteny Shinoa ny momba ny lalàna Stop Online Piracy Act (SOPA), na Fandraràna ny Fijirihana ao amin'ny Aterineto izay andrasana ho entina hofidiana eo amin'ny Antenimiera Amerikana alohan'ny faran'ny taona. Voakinan'ny Amerikana foana ny governemanta Shinoa tamin'ny fanelingelenana ny fivezivezen'ny vaovao tamin'ny alàlan'ny rafitra iray fanivànana fanta-bahoaka amin'ny hoe ilay Rindrimbe, na Great Firewall. Anjaran'ny Shinoa mpiondana aterineto indray izao ny mihomehy amin'ny tolo-dalàna momba ny Great Firewall Vita Amerikana.
Porto Riko: Nasehon'ny Bilaogera fa Namboamboarina Ilay Dokambarotra
Amerika Latina 07 Desambra 2011
Nisy dokambarotra iray nahitana ilay mpihira sy mpilalao sarimihetsika Porto Rikana Jennifer López mitondra Fiat 50 cc manerana ny lalan'i Bronx, New York, toerana nahitany masoandro sy nahalehibe azy. Milaza momba ny fiaviany eo amin'ny toerana sy ny aingam-panahy azony avy aminy i López. Naseho eo amin'ny pejy ofisialin'ny Fiat ofisialy eo amin'ny...